Semalt: Samihafa karazana tranainy sy ny fiantraikany
Frank Abagnale, Semalt Mpitantana Success Manager, dia nilaza fa noforonina mba hangalarana ny fampahalalam-baovao avy amin'ny mpiserasera. Niparitaka tamin'ny alàlan'ny mailaka, keyloggers ary dokam-barotra ny bots. Mampiasa solosaina an-tapitrisany an-tapitrisany izy io amin'ny fanatanterahana ny logging, ary ny fanafihana fitifirana kaonty amin'ny banky ary manangona angona tsy miankina. Manangona ireo vaovao ireo ny trozona, ary nanambara ny FBI fa nahita cybercriminal izay nampiasa an'i Zeus noho izy naka 20 tapitrisa dolara avy amin'ny banky Kanadiana.
Karazana tranaona samihafa:
Ny tranaona dia azo sokajina ho sokajy samihafa mifototra amin'ny fahombiazany sy ny karazana fanafihana.
Ny trozona mampihemotra dia manome ny hackers ho afaka hifehezana ny fitaovana ampiasainao ary hanaparitaka solosaina maro. Manampy mora ny mpamorona ny manao asa isan-karazany izay tiany indrindra, anisan'izany ny fandefasana, manomboka, manidy sy mandray ireo rakitra, mametaka ny ordinatera ary maneho ny angon-drakitra. Ny trojans maimaim-poana dia ampiasaina betsaka mba hampiray ireo vondrona solosaina tra-boina ary hamorona tambajotra zébus na botnet.
Exploit dia trondro iray izay misy rakitra sy code mahatsikaiky ary mandray tombontsoa amin'ny fahalemena ao amin'ny ordinateranao na ny fitaovana findainao.
Ny rootkits dia natao mba hanafenana zavatra sy zavatra atao manokana ao amin'ny milina. Ny tanjon'izy ireo voalohany dia ny hanaparitaka ireo zavatra ratsy manerana ny tranonkala manerana izao tontolo izao ary hanitatra ny fotoana ahafahan'ireo programa hametrahanao tsara
4. Trojan-mpiasan'ny banky
Ny karazana trozona manokana izay manampy ireo hackers hangalatra ny antontam-peon'ireo mpampiasa samihafa. Ireo hackers dia mampiasa izany vaovao izany amin'ny fangalarana vola avy amin'ireo banky anaty aterineto, carte de crédit sy debit ary ny e-bola rafitra.
Ny Trojan-DDoS dia tompon'andraikitra amin'ny fitarihana ny fanafihana rehetra ataon'ny DoS (fandavana ny tolotrasa) amin'ny adiresy kinendry. Maniraka fangatahana marobe amin'ny mpampiasa izy ary mitondra voka-pifandraisana maro.
6. Ny rindrankajy-Ransom
Tokony hanara-maso tsy tapaka ny fampisehoana sy ny asan'ny rafitrao ianao mba hialana amin'ny fitondran-tena tsy mety. Ny fitaovanao sy rindrambaiko rehetra dia tokony havaozina indrindra indrindra ny pejin'ny fiarovana anao.
Tokony hampiofanana ireo mpampiasa mba tsy hianjadian'ny asa izay mampiakatra azy ireo amin'ny loza mety ateraky ny fitsaboana amin'ny bot sy ny fanafihana malware.
Ny SMS SMS dia handoa vola anao ary handefa hafatra amin'ny alàlan'ny findainao amin'ny alàlan'ny findainao amin'ny tolotra nomerao isaky ny andro.
Ny mpitsikilo Trojan dia ny programa izay miditra ao amin'ny rafitrao automatique ary mamitaka ny sora-baventyo, maka sary screenshots ary mahazo lisitry ny fampihetsikao rehetra
Antivirus sy anti-malware ary anti-malware voarindra